Pôlistirenina - Wikipedia
Ny Pôlistirenina (PS raha afohezina) dia pôlimera -(CH2-CH(Ph))n, azo avy amin'ny pôlimerizasiôna ny mônômera ny stirenina CH2=CH-Ph.
Ny polistirenina fototra, tenenina hoe Polistirenina vatosonga, dia zavatra mafy sady mora vaky, mety voaloko na tanterankazavana. Ny tondro mekanikany sy ara-kafananany dia mety ho voaova amin'ny fanampiana plastifiant na biotadienina (fingotra) mba afahana manao pôlistirenina tenenina hoe choc.
Ny pôlistirenina dia zavatra mora avadika, amin'ny alàlan'ny fampitsitsirana na extrusion ohatra.
Amin'ny lafin'ny fampiasana, fantatra amin'ny lafiny mora vaky izy miaraka amin'ny loko fotsy eo amin'ny faritra voageja. Ny fomba famantarana azy haingana dia mandozo ary mba hijery ny afo, ny setroka ary ny fofony ; zavatra tsy tokony atao noho ny tôksisite ny etona mainty sy ny fofony.
Ny pôlistirenina dia foronina amin'ny polimerizasiona ny stirenina. Aotôklavy izy eo ary ny fiota simikany dia mamoaka pôlistirenina.
Ny PSE na polistirenina naitatra dia namboarina amin'ny alàlan'ny fanangaroana etona sy PS vatosonga. Alohan'ny fahatairana ho an'ny lamaka ôzônina, nampiasaina ny freôna, etona KFK (na CFC : Klôrôfliôrôkarbiura), nosoloina tamin'ny biotanina na pentanina tamin'ny taona 1990.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pôlistirenina&oldid=635419"
Dernière modification le 2 Aprily 2013, à 19:14
Voaova farany tamin'ny 2 Aprily 2013 amin'ny 19:14 ity pejy ity.